Amaholide omndeni eCatalonia, L'Ametlla de Mar | Izindaba Zokuhamba
Amaholide omndeni eCatalonia, L'Ametlla de Mar
USusana Garcia | | Spain amadolobha, General, Ukuhamba nezingane
Ugu lwaseCatalonia lunezindawo eziningi ongazithola, izindawo ezifana ne-Ametlla de Mar, lapho izingane zingajabulela khona ilanga eligcwele olwandle, ukuzijabulisa ngemisebenzi ehlukahlukene, ukudala izinkumbulo ezinhle ngeholide labo lasehlobo. Kuhlelo Ugu lwaseCatalan kunezinto eziningi okufanele uzenze, amabhishi okufanele uwabone, amadolobha nezindawo ongazihlola kanye nokuhlangenwe nakho okuningi ukuze uphile ngeholide lomndeni.
Cabanga ngesigcawu, amanzi ahlanzekile e-crystal ahlanzekile, anezinga lokushisa elimnandi, lapho ungacwila khona ngaphandle kokucabanga, ibhishi elinemisebenzi yobumnandi, usuku libalele sijabulela umndeni, nezingane zakhe izinqaba zesihlabathi futhi zibhukuda ngokuthula ebhishi eliphephile. Lokhu nokunye okuningi ongakuthola ku-l'Ametlla de Mar. Futhi kuyinto encane nje yakho konke amaholide asogwini lwaseCatalan angakunikeza wona.
1 Usuku lolwandle nge-snorkeling
2 Amanzi nemisebenzi yezemidlalo
3 Phumula ehhotela lomndeni elifanele
4 Amaholide nezingane eCatalonia
Usuku lolwandle nge-snorkeling
E-l'Ametlla de Mar kungenzeka ukujabulela ngokugcwele ugu nomndeni. Kunama-cove ahlukene ongaya kuwo, njengeCala Bon Capó noma iCala Arandes, amanye awo acashile futhi ethule. Kule ndawo yezivakashi ogwini kungenzeka ukujabulela amanzi azolile, aphephe kakhulu ezinganeni, nawo ahlinzeka ngokujula okuncane, ngakho-ke zilungele ukuzivumela zibhukude futhi zihlole. I- i-snorkeling izoba ngomunye wemisebenzi oyithandayo kulawa mabhishi, ukuthola olwandle kanye nayo yonke ingcebo yalo. Usuku olwandle olukule ndawo yasogwini lwaseCatalan lisho ukujabulela amanzi anezinga lokushisa elimnandi nokubukeka kwamakristalu, namabhishi lapho kuneminye imisebenzi eminingi yomndeni.
Amanzi nemisebenzi yezemidlalo
Uma izingane zifuna ukuthola okuthile okungaphezu kokuthwebula nge-snorkeling e-Ametlla de Mar, zinamathuba amakhulu, ngoba eCatalonia kuningi okuthiwa iziteshi zasolwandle, okuyizindawo lapho ungajabulela khona inani elikhulu lemisebenzi yamanzi, njengoba kwenzeka kule ndawo yezivakashi eCosta Dorada. Imisebenzi icishe ingapheli, futhi ikhona eyenzelwe wonke umndeni noma abantu abadala ukuthi bayijabulele. E-l'Ametlla de Mar kunesikole sokuntywila lapho ungazama khona lo mdlalo ukuthola olwandle, lapho kukhona ngisho nezikebhe ezicwile. Njengoba kunamazinga ahlukene, wonke umuntu angajoyina.
Kepha ubumnandi abupheli lapho, futhi ungenza ezinye izinto, nge ezemidlalo ezinjenge-surfing, imizila ye-kayaking yomndeni, ukugwedla ngegwedlo, ukuvakasha kwe-catamaran ukubona ugu ngolunye uhlangothi noma ukuqasha izikebhe Enye yezinto ezenziwa izinkanyezi kule ndawo ukubhukuda phakathi kwamakhulu e-tuna yasendle ye-bluefin, okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele lapho ungafunda futhi ngomlando nokubaluleka kwe-gastronomic ye-bluefin tuna.
Phumula ehhotela lomndeni elifanele
Ngemuva kosuku olunamandla lwemisebenzi ogwini lwaseCatalan, sekuyisikhathi sokuphumula kancane. Imindeni ingahlala ngaphakathi amahhotela agxile ekuphumuleni komndeni, lapho bangajabulela khona izikhala zezingane kuphela nezinsizakalo ezithakazelisa kakhulu kubo. Amahhotela aseduze nolwandle, akwazi ukuhamba, ngokunethezeka, ngaphandle kwengcindezi noma ukushesha kwanoma yiluphi uhlobo. Ngamamenyu omndeni endaweni yokudlela, ngokuzijabulisa kwezingane kanye ne-mini-club ukuze izingane zikwazi ukwenza imisebenzi efanele iminyaka yazo. Indawo efanelekile yokuthi umndeni uchithe iholide elihle futhi ube nokuhlangenwe nakho abafuna ukukuphinda ngonyaka ozayo.
Amaholide nezingane eCatalonia
Ukuhamba nezingane kusho ukuhlelela izinto eziningi, imisebenzi yazo nokuphambukiswa okufanele iminyaka yazo futhi ngaphezu kwakho konke kuphephile. Uma ungenayo imibono eminingi engqondweni, ku ICatalonia kunezindawo eziningi zezivakashi lapho izingane zizothokozela ukuvakasha kobumnandi, komasipala lapho bacabange khona ngokuthola izivakashi ezibhekiswe eminyakeni yazo. Iya eCambrils ukubona idolobha lakhona lakudala futhi uchithe usuku olwandle lolwandle oluhle, uye eSalou, enye indawo enamabhishi amahle futhi usondele kakhulu epaki lokuzijabulisa noma uchithe usuku ebhishi laseCasteldefells nesikole sokuhamba ngomkhumbi.
Le ngeminye yemisebenzi engenziwa ezindaweni eziningi ezingasogwini lwaseCatalan. Kepha uma sesivele sijabulele isihlabathi namanzi afudumele emabhishi aso, kungenzeka siye ezindaweni ezimaphakathi nezwe ukuyoshintsha imisebenzi. EVall de Boí ungahamba ngemizila yamabhayisikili asezintabeni, noma kukhona nemizila yokuhamba izintaba ezindaweni ezifana nezintaba zePrades.
Hambani njengomndeni Kungaba yinto ehlukile futhi engaphindeki, kumnandi kakhulu futhi kunothise wonke umuntu. ECatalonia kunamathuba amakhulu kwezokuvakasha komndeni, enemibono yakho konke ukuthanda. Ibhishi noma intaba, amanzi, amasiko nemisebenzi yezemidlalo. IL'Ametlla de Mar iyikona elihle elinokunikela okuningi, kepha kukhona uhlu olude lwezindawo ezithakazelisayo kulo lonke izwe laseCatalan. Ingabe siyabathola njengomndeni?
Ulwazi oluningi ICatalonia yikhaya lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amaholide omndeni eCatalonia, L'Ametlla de Mar
Amahora, amanani kanye nemininingwane yokuvakashela iMadame Tussauds Museum